टीएनको सांगीतिक मर्यादा – Rajdhani Daily
टीएनको सांगीतिक मर्यादा
काठमाडौं÷रास– गीतकार टीएन रेग्मी तथा संगीतकार प्रकाश नेपालीको एकल गीतसंगीत रहेको गीतिसंग्रह ‘मर्यादा’को शुक्रबार राजधानीमा एक समारोहबीच गीतकार डा. कृष्णहरि बराल र संगीतकार राजु सिंहलगायतले विमोचन गरे ।
संग्रहका गीतबारे समीक्षा गर्दै डा. बरालले नेपाली संगीत क्षेत्रमा आशालाग्दो गीतकारका रूपमा टीएन रेग्मी भित्रिएको बताए । उनका गीतमा कलाकारले आफ्नो स्वरबाट न्याय गरेका उनको भनाइ थियो । यस्तै, संगीतकार सिंहले सो गीतिसंग्रहको संगीतको समीक्षा गर्दै गीतसंगीत कर्णप्रिय बनेको बताए ।
नवोदित गीतकार रेग्मीले नेपाली गीतसंगीतमा लगानी गर्दा कत्ति पनि प्रतिफल नआउने जानकारी हुँदाहुँदै कृतिका रूपमा ल्याउन यो संग्रह निकालेको बताए । आफूले यो गीतिसंग्रह निकाल्ने क्रममा भोगेका समस्या पनि उनले सुनाए ।